10 Most Beautiful Streets EYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 10 Most Beautiful Streets EYurophu
IYurophu uzele ezinye Most Beautiful Streets. Ukusuka ubuhle kakhulu kwaye inemibalabala ukuya engaqhelekanga. Ezinye Streets Most Beautiful EYurophu sele yafunyanwa kwaye kakuhle nendele lwengoma umkhenkethi kodwa abanye real ubuncwane obufihliweyo ukuba kuphela abo azi iya kukwazi ukuba ahambe. Siye sibeke kunye kuluhlu lwethu phezulu!
1. Most Beautiful Street EYurophu: Cremieux street, Paris, Fransi
Kukho into ethile malunga nezindlu ovame kunye elidala, izitrato cobbled le Cremieux street ukuba nenze ukubeka yakho camera phantsi akunakwenzeka! Le isitalato gorgeous izindawo igcwele pinks, imifino, yellows, kunye neblues, nawuphi na umbala ukuze lifane naluphi ngubo loo photo shoot imbopheleleko. Ngaba oko ngenxa gram, guys!
2. via Toledo, Naples, ElamaTaliyane
U-Via Toledo sisitrato samandulo kwaye yenye yeendlela zokuthenga eziyimfuneko kwisixeko saseNaples, ElamaTaliyane. lo 1.2 awu yembutho yenye Streets Most Beautiful EYurophu. Iqala e Piazza wabe luze luphele ngo-Piazza Trieste e Trento, kufuphi Piazza del Plebiscito.
Ukwakhiwa esitratweni kuyalelwe viceroy Naples, Pedro Alvarez de Toledo, ngo 1536. Via Toledo waye waduma ngenxa uhambo Grand Tour ngenkulungwane ye-18 kunye 19 yaye ngenxa iingoma Neapolitan, apho kuphawuliwe rhoqo.
3. Most Beautiful Street EYurophu: Kynance Mews, London, England
Ivy wambu izindlu kunye ngezinyuko eyimfihlo. Kynance Mews e Kensington yeyona Most Beautiful Streets EYurophu. ekwindla, esitratweni uba kunye amagqabi aluhlaza kunye iBurgundy, kwaye xa kufika intwasahlobo, izindlu abe ehlathini purple. Le ndawo of London umbono nayiphi webhlogi ngayo ezulwini!
4. Calleja de Las Flores, Cordoba, Speyin
I Calleja de las Flores ngomnye ezitratweni ezininzi ezithandwayo kubakhenkethi of Cordoba sixeko eAndalusia, Speyin. Yiloo nto ke phezu kuluhlu lwethu lwe Most Beautiful Streets EYurophu. Kubekwe i ekudibaneni kwe-street Velazquez Bosco, na isitalato emxinwa uphela iplaza.
Iindonga ezimhlophe ilandelelanisiwe abani-, iimbiza intyatyambo yesikhumba ezaliswe geranium kunye carnations, enika pop umbala yozuko kule nxalenye ekhethekileyo ngokwenene wedolophu. Kunye limxinwa yayo, floor cobbled, iiarchways zamatye, Kwaye ke uhombiso oluhle lwodonga, i Mezquita Cathedral ukho imbono phakathi kweendonga ngokwenza ukuba ukongeza ogqibeleleyo ukuba ifoto sendigqibelele.
5. Most Beautiful Street EYurophu: Chalcot Square, London, England
Ukuhamba kude kwi isikwere esincinci kufutshane nePrimrose Hill, uya kufumana enye yezona ziNdlela ziNhle kakhulu eYurophu kunye ne kakhulu Instagrammable! Khawube nomfanekiso lomzila Nondlwana Shiny pretty kwabemiyo eliphezulu, enomva emhlabeni amancinci, park eluhlaza ukuba Chalcot Square. Oku ilitye ulilahle kude Regents Park kunye Camden Market odumileyo.
6. Rozenhoedkaai, wasebenzisa, Bheljiyam
Ukuba wawubona umboniso, In Bruges no Colin Farrell. Niya kuqonda ke kanye le nto sithetha ngayo. mhlawumbi Le yenye amabala yeyona yokuchitha loo mzuzu leposi! Rozenhoedkaai abe isitalato ngaphantsi ezifana ngaphezu kwezinye iindawo abakolu luhlu, kunjalo, sasicinga ukuba kunjalo hola ukukhankanywa into. Enoba ixesha lonyaka, Rozenhoedkaai uba ukuba iindwendwe yayo. Kukho into ke ingane malunga izakhiwo fairytale kwaye billowing imithi ukuba phantse nkxu emanzini emisele.
7. Most Beautiful Street EYurophu: Victoria Street, Edinburgh, Scotland
Yonwabela chu Edinburgh cobbled Victoria Street lizele fun, iivenkile unique, kunye eateries. Victoria Street undinike isiqwenga esiluqilima imbali sixeko kunye neendonga zawo zamatye nomtsalane ukutsala abatyeleli ubudala ubudala kulo lonke. Qiniseka ukuba uhamba ukuya Grassmarket nesuka ngenkulungwane ye-14 kwaye athengise ngeento zonke iintlobo lemveliso zasekuhlaleni kunye amasuntswana ukuba pick up.
8. Nyhavn, Copenhagen, Dominikha
I-Nyhavn ikhathaza ibhokisi ukuba ibe ngumfanekiso-ogqibeleleyo wesitrato secala eligqabhuka ngombala, kunye iimasti umkhumbi yokuchitha, iikofu ezimnandi, kunye neevenkile zokutyela ezikumacala omabini. Le dolophu inama Copenhagen kaThixo quirky ojikeleze hipster vibe kwakunye esitratweni ubangel kwisixeko. Alukho uhambo oluya eCopenhagen olugqibeleleyo ngaphandle kokuhambahamba kunye nefoto apha nangona.
9. Most Beautiful Street EYurophu: Burano, Venice, ElamaTaliyane
A uhamba (okanye ride isikhephe) le isitalato ezintle e Venice kufana nokuthatha utyelelo umnyama. Burano sisiqithi phakathi yelo Lagoon, kodwa ukuba ngaba unethamsanqa elaneleyo ukuba ndinityelele uya ambambe yakho camera (Imfonomfono) ngoko nangoko. Izindlu kunye emjelweni ezintle ebaleka ngqo ngalo kube njalo ingane. Luhlobo lendawo olunokuphakamisa imo yomntu nangoko nangoko.
10. East Side Gallery, Berlin, Jemani
Thatha chu kakhulu ehlabathini we-East Side Gallery. A esitalatweni kunye unxulumano oluthe ngqo open-air galari kokutyatyekwa bonke kunye Amanxiwa Berlin Wall. Kukho amathuba Insta Galore phantsi le isitalato njengoko umsebenzi liyamangalisa, kodwa kukwayinto ebandayo isikhumbuzo yembali eBerlin kunye kwiMfazwe Yomlomo.
Ingaba ukulungele ukuya kutyelela Oyena Beautiful Streets EYurophu? Qinisekisa ukuba incwadi Gcina A Isitimela Akukho ntlawulo engaphezulu, akukho engaka, kumnandi nje!
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “10 Most Beautiful Streets EYurophu Ukuze Hlola” kwi sayithi yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-beautiful-streets-europe%2F%3Flang%3Dxh – (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
zengeni europetravel longtrainjourneys zintinki trainjourney oololiwe tips uloliwe